Otú ịgbanwe ID3 Tags n'ihi na gị na Music Library
> Resource> Download> otú ịgbanwe ID3 Tag n'ihi na gị MP3 Files na ala
Otu MP3 faịlụ agụnye ọ bụghị nanị ahụ n'ezie track, ma ndị ọzọ na ọmụma-ID3 mkpado-banyere song, dị ka aha, ọgụ egwu, album nkà na ndị ọzọ. Ọ bụ oké egwu na ID3 mkpado na-ezi ma na-kenha, ma ọ bụghị iTunes ọ bụ ndị ọzọ music software gaghị enwe ike idozi ma jikwaa songs kwesịrị ekwesị. Dabara nke ọma, ọ bụghị ike ịgbanwe ID3 mkpado maka MP3 (ma ọ bụ M4A) faịlụ na enyemaka nke Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic), nke bụ ihe nile-na-otu ngwá ọrụ ịhụ na Embed ID3 mkpado gaa na faịlụ MP3. Ke adianade do, ọ na-enyere gị dezie ID3 mkpado site onwe gị. Nwere ike na-eche na ego ya? Dị nnọọ na-usoro ihe omume site na nbudata njikọ n'okpuru na-eso zuru ezu nkuzi.
1 mbubata gị music n'ọbá akwụkwọ
Ẹkedori usoro mgbe nwụnye. Ozugbo ọ ga-emepe, ọ ga-iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ma tinye niile songs na.
Tịm fiọk: Ị pụrụ inwe ihe music bụghị jisiri site iTunes. Mbubata ndị songs, ị ga-aga idozi Music ime ya site onwe gị. Dị nnọọ ịdọrọ music nchekwa na faịlụ tree ma ọ bụ pịa Open File bọtịnụ na họrọ faịlụ ka ịgbakwunye na faịlụ tree.
2 Chọta ID3 mkpado maka songs
Iji chọta ID3 mkpado na ogbe, gaa na nkụnye eji isi mee akụkụ nke usoro ihe omume ma na-achọta a iṅomi bọtịnụ. Tinye akà rà checkbox nke Chọọ maka unidentified Songs na pịa iṅomi button, mgbe ahụ, a usoro ga-amalite chọta ID3 mkpado maka niile songs na faịlụ tree.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ ịhụ ID3 mkpado n'ihi na otu onye ụfọdụ song, ọ dị mfe. Họrọ song na pịa Chọpụta bọtịnụ na ala nke nri n'igbe. Mgbe ahụ na-eche maka nchọgharị usoro ga-eme, nke ga-abụ nnọọ ngwa ngwa.
3 ịgbanwe ID3 mkpado na a click
Mgbe niile ID3 mkpado na-chọpụtara, ị nwere ike embed ka MP3 faịlụ na a click. Họrọ song na mbụ na ọhụrụ ọmụma ga-egosipụta na nri n'igbe. Ọ bụrụ na ị afọ ojuju banyere ọhụrụ ọmụma, pịa Mee bọtịnụ na ala ka embed ID3 mkpado na MP3 faịlụ. Ịgbanwe ID3 mkpado maka ọtụtụ songs, dị nnọọ họrọ ha na pịa Mee button na nri n'igbe.
Cheta na: Ụfọdụ n'ime nwere ike ị chọrọ dezie ID3 mkpado site onwe gị. Họrọ otu song na pịa Dezie icon na nri n'igbe. Mgbe ahụ jupụta na edezi ubi dị ka ị na-ahọrọ.
Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Ị kwesịrị ị na ibudata usoro ihe omume na-enye ya a ogbugba. Ọ ga-ekwe ka ala.
Olee otú Tinye Lyrics ka Songs na ogbe
Video saịtị dị ka YouTube na mba dị iche iche